GIS Kit, n'ikpeazụ ihe dị mma maka iPad - Geofumadas
N'ikpeazụ, ana m ahụ ezigbo ngwa maka iPad gbakwunyere iji nweta data GIS n'ubi.
Ngwaọrụ nwere ọtụtụ ihe, ma tinye ya ngwa ngwa m gbalịrị dị ka GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS maka iPad na GISRoam; Nke ikpeazụ a dị ike ma bụrụ enyi na-arụ ọrụ ma na-elekwasị anya na nyocha karịa ijide.
GIS Kit bụ mmepe nke garafa.com, ndị na-eme GPS Kit.Ọ na-abịa na nsụgharị abụọ: GIS Kit na GIS Pro; isi ihe dị iche maka ugbu a bụ na njikwa nke .csv data, bluetooth transfer, ịkekọrịta atụmatụ klas datasets na mbupụ iji mezie faịlụ; na arụmọrụ ndị ọzọ ha yiri. Pricegwọ nke ụdị Kit dị na $ 99, a ga-akọwa nke ọzọ na izu 5 na-esote dịka ndị dere ya si kwuo.
Ka anyị lee anya ma ọ bụrụ na ọ bara uru:
1. Ntinye nke data na GIS Kit
Nhazi usoro a sitere na oru ngo, nke gunyere otutu nke nwere ike ijide mkpịsị aka aka na ihe kacha mkpa, nghọta ma ọ bụ gbanyụọ / na Dị nnọọ irè ma dị mfe, ị nwere ike ịmepụta, detuo, bugharịa oyi akwa. I nwekwara ike ịkọwapụta ọtụtụ àgwà dịka mkpa, gụnyere ụdị foto; enwere ike iwere ya ozugbo iji iPad2 ma ọ bụ họrọ site na ndetu ihe oyiyi; iche ọ na-akwado ndepụta (ngwakọta igbe), boolean (igbe nlele), ụbọchị, url, akara ekwentị, na ndị ọzọ.
Banyere ọdịdị nke nkedo, ọ bụ nnọọ ihe omimi, na-enye gị ohere ịhọrọ oke nke ókèala, agba, ụdị ntinye dị mfe ma dị mma.
Dị ka map ndị dị na ya, ọ karịrị ihe m na-atụ anya:
Map Google, na Street, Satellite na ngwakọ.
Atụmatụ Bing, n'okporo ámá, satịlaịtị na ụdị Topo.
Mepee Street Street na Open Topo map.
Ihe Pro Pro ga-akwado WMS.
Nakwa ederede ahazi ma ọ bụrụ na ebu ebufere na faịlụ zipz.
Ka nke kachasị, ọ nwere ike ịche ya iji hụ na ọ na-anọghị n'ịntanetị mgbe ị na-aga n'ọhịa n'enweghị njikọ Ịntanetị.
2. Nchịkọta data n'ọhịa
Enwere ike ịlele anya n'etiti isi abụọ, ma ọ bụ na ọtụtụ ụzọ. Enwere ike igosi ha na mita, yaadị, ụkwụ, na maịlị gasị.
Na-akwado usoro ịhazi na lat / ogologo na UTM. O nwekwara USNG na MGRS nke bụ sistemu a na-ejikarị eme ihe na United States, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na WGS84.
N'ebe etinyere gị, ọ na-egosi data dịka isi, nhazi, ọsọ, wdg. Ma ewezuga na ọ nwere ike ijide data na GPS ọ nwere n'ime ya, maka nke a ọ chọghị njikọ internetntanetị, mana akara ngosi ọ bụla dịka GPS ọ bụla. Cheta na ijide ebe GPS abụghị ezigbo ihe, mana ọ bụ usoro nha nha n'ụdị pulses. GIS Kit nwere nhọrọ ijide data site na njirisi nzacha.
Họta site na ịdị anya. Enwere ike ịgwa ya ka ị ghara ijide data ma ọ bụrụ na enweghị oke mbibi nke ụfọdụ dị anya.
Iyo n'oge. Nwere ike ịgwa ya ka o weghara data na sekọnd ole na ole ọ bụla, ọ gbasaghị ma ọ bụrụ na enwere mpịgharị, mba, mba.
Iyo maka nkenke. Enwere ike ịgwa gị naanị ijide data mgbe ejiri oke nkenke gafee.
Ultra kpọmkwem iyo. Nke a bụ ọrụ Apple na-enye ndị mmepe ngwa, nke usoro a na-eme ka ngwaọrụ chọọ naanị ozi ziri ezi ma ọ bụghị obere mkpịsị ugodi.
Nchọpụta ahụ nwere ike ịbụ nke isi, akara ma ọ bụ polygons, dabere na nhazi nke oyi akwa eji. Ozugbo e jidere ihe ahụ, a na-egosipụta otu pịnye iji tinye data ahụ.
3. Nhazi data
Ozugbo anakọtara data ahụ, ọ bụghị naanị mkpụrụ akwụkwọ alphanumerics kamakwa jiometrị (akara, isi, polygon na nsuso) nwere ike dezie. Ọbụna enwere ike nyochaa polygon na GPS ma ndị ọzọ nwere ike ịkọwapụta, ọ bara uru ijikọta GPS na nkọwa foto mgbe ọnọdụ zuru ezu kwere ya.
4. Akwado formats.
Nke a nwere ezigbo oge, ọ bụ ezie na a ghaghị ime ka o doo anya na ọ bụ ngwa GIS ngwa ngwa, yabụ CAD, ma ọ bụ nyocha ga-eme site na desktọọpụ.
Import na mbupụ data si ESRI (shp), Excel (CSV) Google Earth (KML / KMZ) na nwetara na ndị ọzọ GPS Exchange Format (.gpx) formats, ka akwụkwọ ndị a mmemme, ma ndị a nwere ike eme ihe fọrọ nke nta ọ bụla ugbu a GIS ngwa.
Okwu nke kmz bụ ihe na-adọrọ mmasị, nke ghọrọ usoro mara mma karịa nke ochie shp, ebe ọ na-akwado data dị ka foto metụtara na ubi na ọbụlagodi georeferenced orthophotos na ihe karịrị otu kml n'otu faịlụ ahụ. A na-ahụkwa usoro a dị ka ọkọlọtọ OGC ma na-akwado bits 32, nke karịrị tebụl ndị mgbe ochie .dbf ọ bụ ezie na n'ihe gbasara àgwà ọ chọrọ ụfọdụ ọrụ xml.
Enwere ike ibufe akwara site na email, iTunes, Bluetooth na iCloud.
Na nkenke, ihe kachasị mma m hụgoro iji nweta ọtụtụ uru na iPad n'ọhịa. O di ka ihe doro anya ma nwekwaa ike inweta oru ndi bara uru ebe ibiputa akwukwo karie nkenke, dika ala na ulo, ihe ndi oru ugbo, oru ndi mmadu na aku na uba ma obu oru oke ohia ...
Ọ na-adịrị m na ọ gaghị adị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ya na nyocha nke cadastral ime obodo, ebe ọ bụ na n'ọfịs ị nwere ike ibudata onyonyo satịlaịtị na nchekwa, wee gaa n'ọhịa n'agbanyeghị njikọ Internetntanetị. N'ebe ụfọdụ, onyonyo ahụ enyere na Google na-ezute ọnọdụ ziri ezi ziri ezi, agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ nwere ederede nke ya, enwere ike ibugo ya na ọrụ WMS ma ọ bụ na faịlụ kmz iji gaa n'ọhịa.
Ọ bụ ezie na a tụrụ atụmatụ ahụ, a ga-ejupụta faịlụ cadastral ahụ, a ga-ewepụta foto ndị metụtara ya, ọ ga-ekwe omume ịdọrọ akụkụ ntụgharị ntụgharị nke na-achọghị ụzọ, see ụlọ ma ọ bụ ọdọ mmiri, kewaa ihe ọkụkụ na-adịgide adịgide ma ọ bụ dezie faịlụ dị. O siri ike ịhazi data niile dị na ndekọ aha ala na ụzọ ọtụtụ, ọbụlagodi na njikọ 3G dị mfe data nwere ike iru sava klaasị njirimara.
N'ihe gbasara nyocha nke obodo mepere emepe, enwere ike iji ya dị ka ihe mgbakwunye, na-ebulite ihu niile na ọdụ zuru oke yana ihe egwuregwu a, na-atụgharị foto ma ọ bụ tụọ ego nke ụlọ ndị a, see ụlọ ahụ ma mezue faịlụ cadastral ma ọ bụ nyocha mmekọrịta akụ na ụba. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye oge ndị ọkachamara na-ewe iji dee na akwụkwọ ndetu ahụ, lelee ndepụta nke Koodu, were igwefoto ọzọ were foto, wee gaa n'ọfịs, mezue faịlụ ahụ, see eserese na ọnụ ọgụgụ, gbakọọ mpaghara ahụ e wuru, mee ngụkọta na tinye data n'ime sistemụ ... ọ nwere ike ịbụ ee ee, nke a nwere ikike.
Ka anyi ghara ikwu ihe ozo ndi ozo, n'ihi na iji me.com ị nwere ike ịchọta ebe ndị technicians nọ, oge ole ha furu, ebe ebe na-ekwesịghị ekwesị ... gụnyere ebe onye ohi were iPad.
Maka ozi ndị ọzọ http://giskit.garafa.com/.
Previous Post«Previous Usoro Java iji mụta site na ọkọ
Next Post Foto nke 13Next »
4 Na-aza "GIS Kit, n'ikpeazụ ihe dị mma maka iPad"
cristian kwuru, sị:
Onye maara otú m na-esi ebuo isi ihe dị na GIS Pro
David Uribelarrea del Val kwuru, sị:
Ị ma ihe ziri ezi GPS ka ọ rụọ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị? Ọ dị mkpa iji tụnyere akara nke Bad Elf ụdị ma ọ bụ jiri ụdị Bluetooth ọ bụla mee?
Emere ya na iOS SDK si Apple, na interface a maara dị ka Xcode.
Patricio kwuru, sị:
kedu nke e mepụtara ngwa a mara ya?